IFRC : mendrika ny fandaharanasan’ny tanora ao amin’ny CRM | NewsMada
Nahazo ny loka avy amin’ny federasiona iraisam-pirenen’ny Croix Rouge sy ny Croissant Rouge ny fandaharanasan’ny tanora ao amin’ny Croix-Rouge Malagasy izay tarihin-dramatoa, Razafimanantsoa Amintsoa.
Niompana tamin’ny famelabelarana ny tetikasa mikasika ny ady amin’ny fanilikilihana sy fandrahonana mianjady amin’ny mpianatra any an-tsekoly ny lohahevitra nahazoan’ny fandaharanasan’ny tanora ao amin’ny CRM loka. Ampiharina manomboka amin’ity taona ity rahateo izany tetikasa izany.
Vola mitentina 12 tapitrisa Ar sy ordinatera iray entina hanombohana ny tetikasa no loka azo.
Mampirisika ny tanora hiezaka hatrany amin’ny asa fanakaikezana ny fiarahamonina izao fahazoana ny loka iraisam-pirenena izao, raha ny fanazavana.
Isan-taona, mandritra ny fivoriamben’ny federasiona iraisam-pirenen’ny Croix Rouge sy ny Croissant Rouge, misy hatrany ny fanomezana mari-pankasitrahana ho an’ireo sampan ao anatin’ny Croix Rouge izay mahavita be eo amin’ny asa fanampiana ny fiarahamonina.
Karazana loka maro no zaraina amin’izany toy ny loka ho an’ireo mpilatsaka an-tsitrapo mahafatra-po sy ny loka ho an’ny tanora mavitrika….